Netherlands na-ewepụ ngwa COVID na-achọpụta mgbe ị chọpụtasịrị ya na-enyere Google aka ịnakọta data nkeonwe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands » Netherlands na-ewepụ ngwa COVID na-achọpụta mgbe ị chọpụtasịrị ya na-enyere Google aka ịnakọta data nkeonwe
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ndị ọrụ App ndị ọrụ nkeonwe data anakọtara site na mmemme ndị ọzọ Google installs na ndabara na ekwentị gam akporo
Ngwa ahụ ji Google Apple Exposure Notification (GAEN) kpuchie ya
Ngwa ngwa ndị ọzọ ekwesighi ịnweta koodu ngwa
CoronaMelder ngwa agaghị ezipu ịdọ aka na ntị gbasara ọrịa nwere ike ibido ụbọchị abụọ
Minista Ahụike na Ahụike, Ọdịmma na Sport nke Netherlands kwupụtara na ọ nwere nkwarụ ngwa ngwa mkpanaka kọntaktị COVID-19 mgbe a chọpụtara na ndị ọrụ mmemme nke Google chịkọtara na ndabara na ekwentị gam akporo.
Ngwa CoronaMelder agaghị ezipu ịdọ aka na ntị gbasara ọrịa nwere ike ibido ụbọchị abụọ, ndị ọrụ ahụike kwuru, sị, ka amachara nchọpụta data ahụ.
Ngwa na-eji Google Apple ngosi ngosi (GAEN) kpuchie - dị ka ọtụtụ ndị ọzọ yiri ngwa eji ofụri EU. Ọ na-arụ ọrụ site na iji koodu na-agbanwe agbanwe mgbe niile gbanwere n'etiti ekwentị dị nso na ibe ha - ma zipụ ịdọ aka na ntị nye ndị nọ na onye ọzọ mechara nwalee nke ọma COVID-19.
Ngwa ngwa nke atọ ekwesighi ịnweta koodu ndị a. Agbanyeghị, ọ tụgharịrị na nke a abụghị ikpe na ekwentị gam akporo, yana ngwa ndị arụnyere na ndabara nwere ike ịgụ data ahụ.
Na nkwupụta, gọọmentị kwuru na nke a bụ 'imebi iwu oge na-egosi na akwụkwọ nkwupụta [maka] COVID-19.' Ndi EU bu obodo eHealth Network choputara mmebi a wee gosi ndi Netherlands na Eprel 22. E bidoro nyocha n'oge na-adịghị anya, nke mere ka Minista Ahụike Hugo de Jonge kwụsịtụ ngwa ahụ nwa oge, n'agbanyeghị na Google 'gosiri' na ọ edozila. okwu.
Gọọmentị anaghị ewere ohere ọ bụla, agbanyeghị, na-achọpụta iji dozie nsogbu ahụ tupu ịhapụ ngwa ahụ ịmalite ọrụ. Ọ ga-eji ụbọchị abụọ ahụ iji "nyochaa ma Google emezila nkwụsị ahụ," ka ozi ụlọ ọrụ ahụ gụrụ.
Dị ka Google si kwuo, nsogbu ahụ sitere na 'nchọpụta Bluetooth na-enweghị atụ nke usoro ngosi ngosi' nke 'na-enweta nwa oge na ọnụ ọgụgụ ole na ole nke ngwa arụnyere.' O kwukwara na data ndị njirimara ahụ nyere 'n'onwe ha enweghị uru bara uru nye ndị na-eme ihe ọjọọ,' na-agbakwụnye na ndị mmepe ngwa ngwa nke ndị ọzọ amaghi na data dị.
Google kwekwara nkwa na ndozi ahụ ga - adị 'ndị niile gam akporo gam akporo na ụbọchị ndị na - abịanụ.' Ndi mmadu 4,810,591 ka ebudatara ngwa Dutch dika nke Eprel 27, dika ulo oru ya.